Ingabe Abantu Abathengisayo Bayothathelwa Indawo Ngamarobhothi? | Martech Zone
Ngemuva kokuthi uWatson abe ngumpetha weJeopardy, IBM bahlangene noMtholampilo waseCleveland ukusiza odokotela ukuthi basheshise futhi bathuthukise amazinga okunemba kokuxilongwa kwabo kanye nemiyalelo. Kulokhu, uWatson wengeza amakhono odokotela. Ngakho-ke, uma ikhompiyutha ingasiza ekwenzeni imisebenzi yezokwelapha, impela kungabonakala sengathi umuntu angasiza futhi athuthukise amakhono omthengisi.
Kepha, ingabe ikhompiyutha iyoke ithathe isikhundla sabasebenzi bokuthengisa? Othisha, abashayeli, ama-travel agents, nabahumushi, bonke baye baba nakho imishini ehlakaniphile ngesinyenyela ezinhlwini zabo. Uma imisebenzi engama-53% yabathengisi ikhona kuyazenzekela, futhi ngo-2020 amakhasimende azophatha ama-85% obudlelwano bawo ngaphandle kokuxhumana nomuntu, ngabe lokho kusho ukuthi amarobhothi azothatha isikhundla sokuthengisa?
Ngasohlangothini oluphakeme lwesilinganiso sokubikezela, uMatthew King, oyiChief Development Officer e-Pura Cali Ltd, uthi ukuthi 95% wabathengisi bazothathelwa indawo ubuhlakani bokufakelwa kungakapheli iminyaka engama-20. IWashington Post inesilinganiso esiphansi ku- isihloko sakamuva lapho bacaphuna khona umbiko we-2013 University of Oxford othi cishe isigamu salabo abaqashwe njengamanje e-United States basengozini yokushintshwa yimishini kule minyaka eyishumi noma emibili ezayo - emaka izikhundla zokuphatha njengenye yezindawo ezisengozini enkulu. Futhi noNobhala wangaphambilini woMgcinimafa, uLarry Summers, muva nje uthe kuze kube yiminyaka embalwa edlule, ubecabanga ukuthi amaLuddite asohlangothini olungafanele lomlando kanti abasekeli bezobuchwepheshe bangakwesokudla. Kepha, wabe eseqhubeka ethi, Angiqinisekile kangako manje. Ngakho-ke, linda! Ingabe abathengisi kufanele bakhathazeke?
Ngiyethemba, kuyindaba yokusebenza futhi hhayi ukuphikisana nayo. ISalesforce Einstein uhlelo lobuhlakani bokufakelwa (i-AI) oluxhunywe kukho konke ukuxhumana namakhasimende futhi nokugcinwa kwamarekhodi amakhasimende ukuze abathengisi bazi ukuthi bangasho nini into efanele ngesikhathi esifanele. ISalesforce ithenge izinkampani ezinhlanu ze-AI kufaka phakathi, iTempoAI, iMinHash, iPredictionIO, iMetaMind, ne-Implisit Insights.
I-MinHash - ipulatifomu ye-AI nomsizi ohlakaniphile ukusiza abathengisi ukuthi bathuthukise imikhankaso.
Tempo - Ithuluzi le-smart eliqhutshwa nge-AI.
UkubikezelaIO - owayesebenza kudathabheyisi yokufunda yomthombo ovulekile yomthombo.
Imininingwane ye-Implisit - iskena ama-imeyili ukuqinisekisa ukuthi idatha ye-CRM inembile futhi isiza ukubikezela lapho abathengi bakulungele ukuvala isivumelwano.
I-MetaMind - kwakha uhlelo lokufunda olujulile olungaphendula imibuzo ehlobene nokukhethwa kombhalo nezithombe ngendlela ecishe isondele impendulo yomuntu.
ISalesforce akuyona yodwa emdlalweni we-AI. Muva nje, iMicrosoft ithole SwiftKey, umenzi wekhibhodi enikwe amandla i-AI ebikezela ukuthi uthayipha ini, kanye I-Wand Labs, unjiniyela we-AI powered chatbot nobuchwepheshe benkonzo yamakhasimende, futhi Genee, umsizi wokuhlela okuhle we-AI.
Njengoba uMathewu King asho:
Lawa wonke amathuluzi angahlaziya imizwa yamakhasimende ku-imeyili noma engxoxweni yocingo, ukuze abathengisi nabenzeli bamakhasimende bazi ukuthi amakhasimende abo azizwa kanjani nokuthi basabela kanjani emibuzweni ethile noma ekuphenduleni. Lokhu kuvumela abathengisi ukuthi bathole ukuqonda kokuthi bangenza kanjani imikhankaso engcono ngokukhomba abantu ngesikhathi esifanele ngomlayezo ofanele osuselwa kokuthandwayo nemikhuba eyingqayizivele yalowo msebenzisi.
Kepha, ingabe bonke lobu buchwepheshe buzothatha indawo yomuntu othengisayo? IWashington Post kusikhumbuza lowo msebenzi wazuza ngqo eceleni komkhiqizo phakathi nekhulu le-19 nele-20 ngentuthuko kwezobuchwepheshe. Ngakho-ke, mhlawumbe kuzoba yindaba yokuthi abathengisi basebenze eceleni kwamarobhothi ukuze benze umsebenzi kangcono.
Sicela ukhumbule abantu bathenga kubantu Ngaphandle kokuthi abathengi bangamarobhothi abangenandaba nokuthenga kumarobhothi. Kepha, impela amarobhothi akhona futhi kungcono ukusebenzisana nawo futhi ungenzi iphutha elifanayo elenziwa nguJohn Henry: Ungazami ukweqa umshini, yenza umshini usize umthengisi enze. Vumela umshini udayise idatha nomthengisi bavale isivumelwano.
Tags: aiukuhlakanipha okungekhona okwangempelai-chatbotgeneefaka imibonoihlobo lesibunguUMathewu Kingmetamind-MicrosoftminhashisibikezeloUPura CaliUkunika Amandla UkuthengisasalesforceISalesforce Einsteinukuhlelaunobhala wesikhwama sezimalii-swiftkeyisikhathiUniversity of OxfordukuzulazulaWashington Post